Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin’ny Avrily 2011
Hafanàm-po nomerika · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Avrily, 2011
Mpanoratra Sasa Milosevic · Azia Atsinanana
Syria: Tafaverina soa aman-tsara any an-tranony ny anankiroa, mbola tsy hita kosa i Khaled El Ghayesh
Anankiray amin'ireo lahatsoratra manokana momba ny fanoherana tany Syria 2011 ity . Tamin'ny herinandro lasa teo, ilay teratany amerikana ejipsiana Muhammad Radwan (fantatra amin'ny @battutta ao amin'ny Twitter) no nosamborina tany Syria satria nampangaina ho mpitsikilo sy nahazo fangatahana avy any ivelany handefa sary sy lahatsary momba an'i Syria. Tamin'ny 01 aprily, nilaza...
Mpanoratra Bhumika Ghimire · Amerika Avaratra
Richard Silverstein, jiosy liberaly iray mpitoraka bilaogy, no iharan'ny fanenjehan'ny elatra havanana mahery fihetsika avy amin'ny nationaliste sy ara-pivavahana. Tao amin'ny bilaoginy Tikun Olam, namoaka filazana iray i Silverstein izay nalefa avy tany amin'ny mpisolovava azy, David Yerushalmi- miampanga azy ho manala-baraka. “Mila tsiny betsaka aho fa voatery hiverina kely amin'ny...
02 Avrily 2011
Syria: Fanoherana ny Kabarin'ny Filoha Assad
Mpanoratra Anas Qtiesh · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nanao kabary tamin'ireo solombavambahoaka Syriana ihany ny Filoha Bashar Al Assad tamin'ny Alarobia 30 Martsa rehefa niandry ela sy nangataka andro maromaro. Niarahaba azy tamin'ny alalan'ny tehaka mirefodrefotra sy horakoraka ireo solombavahoaka tamin'ny fahatongavany tao, ary matetika ny kabary nataony no notapahan'ny solombavambahoaka iray manao tononkalo fiderana.
Taiwan: Antso mba hanopaza-maso ny politikan'ny angovo
Nampitahotra ny vahoakan'i Taiwan ny tranga niseho tany amin'ny toby nokleary any Fukushima any Japana, momba ny fiarovana ny toby nokleary any amin'ny fireneny. Mba hamadihana ny olana misy amin'izao fotoana ho politika maharitra ho an'ny governemanta, mpampiasa aterineto maro no nangataka ny governemanta Taiwanais mba hamerina handinika tsara ny...